10 Izindawo Zokuvakasha Ezinga-Isizini Emhlabeni Wonke | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Izindawo Zokuvakasha Ezinga-Isizini Emhlabeni Wonke
Ukwazi abantu bendawo ngaphandle kwezixuku zezivakashi ezibheke phezu kwehlombe lakho nokuhlasela ikhefi elincane elihle, lezi Zindawo Zokuvakasha Ezingahambisani Nesikhathi Emhlabeni Wonke zingcono kakhulu eholidini elingenakulibaleka.
1. Izindawo Zokuvakasha Zangesizini: I-Ireland Ngo-Okthoba
Kuhlotshiswe ngegolide, umoya omnandi, ubuhle bemvelo base-Ireland bezintaba zeWicklow, ngebanga elifushane nje ukusuka eDublin futhi ufika endaweni engcwele enhle. Lapha, noma yimuphi umzila wokuhamba izintaba ukuholela ezimpophomeni ezimangalisayo, ukubukwa okuhle, kanye nesibhakabhaka esiluhlaza okwesibhakabhaka noma isigodi saseGlendalough kanye ne-6th century monastic settlement.
Inzuzo eyengeziwe yokuvakashela i-Ireland ngaphandle kwesizini yithuba lokujabulela iphenti leGuinness enkantini yendawo, phambi komlilo ovulekile.
2. E-Italy Ngo-Ephreli
Ukuntywila eMedithera, ukukha ama-truffle, namahlamvu amahle wokuwa, I-Italy iyindawo yokugcina yokuvakasha engekho esizini ngo-Ephreli. Intwasahlobo isikhathi esihle kakhulu sokuvakashela i-Italy njengamazinga okushisa, umswakama, amanani, nezixuku ziyancipha.
Wonke umuntu ufuna ukuvakasha e-Amalfi Coast, noma phakathi kwamagilebhisi eTuscany. Nokho, kuyabiza futhi kuyaphithizela ehlobo, inkathi ephakeme. Ngakho, ngo-Ephreli ukuya e-Italy ngaphandle kwesizini yisikhathi esihle sokuhamba.
3. Izindawo Zokuvakasha Zangesizini: ILoire Valley France Maphakathi no-Septhemba
I-autumn dahlia iqhakaza, umoya omusha wasentabeni, amahlamvu ekwindla, nomoya omncane ngezinsuku ezifudumele, uzothola iLoire Valley yesizini iphupho eliphelele. Indawo emnandi yaseFrance yaziwa ngamawayini amhlophe, futhi isikhathi sokuvuna sivame ukuqala maphakathi no-Septhemba.
Ngakho, isikhathi esihle sokuhambela eLoire ngoSepthemba, ukuphela kwesizini ephezulu. Uzokwenzela umkhosi waseChateau de Chaumont Garden, umkhosi wamatamatisi eChateau de la Bourdaisiere, naseFestivini ngomkhosi wayo omkhulu eFontevraud Abbey. Amakhowe akhiwa emigedeni epholile, noma ukuhamba izintaba lapho amazinga okushisa ehla, kodwa izinsuku zisezinde ngokukhanya okukhulu kwemini – ILoire Valley iyindawo emangalisayo yokuphuza isizini ngoSepthemba.
4. Izindawo ezihamba phambili ezihamba ngaphandle kwesizini eJalimane: EMunich NgoSepthemba-Okthoba
Ngaphandle kwegama elidukisayo, umkhosi omkhulu wobhiya uqala ngoSepthemba. I-Oktoberfest yisizathu esimangalisayo sokuhambela eJalimane, nasemzini odabuka kuwo, Munich. Ngalesi sikhathi, uzothola idolobha ngokuxokozela futhi iMunich inama-vibes amakhulu.
Ngenkathi lokhu kusho ukuthi kungenzeka ukuthi uzungezwe izivakashi, yize kungesona isizini ephezulu. Kusafanele ukuhambela eMunich ngaphandle kwesizini ngoSepthemba, ukumane uzwe umlingo we-Oktoberfest.
5. Indawo Yokuhamba Kwangaphandle Kwesizini E-China: IShanghai NgoNovemba
Ngabantu base 26 abantu abayizigidi, uzohlala uzithola usexukwini eShanghai. Nokho, ukuhamba isikhathi sonyaka uye eShanghai kusho ukuthi izivakashi zibuyele ekhaya zivela iholide lasehlobo, ngakho-ke uzobe uxubana nabantu bendawo.
Ngaphezu kwalokho, isimo sezulu eShanghai sithambekele ekubeni yizibhakabhaka ezifudumele nezinomswakama, ngakho-ke kunesizathu esikhulu sokuhamba ngaphandle kwesizini futhi ubabaze ama-skylines aseShanghai ngoNovemba. Okthoba-Novemba yisizini eShanghai lapho kuswakama khona, yokuhlala, futhi izixuku ziyawa. Ngale ndlela uzozuza kakhulu kakhulu edolobheni elijabulisayo nelimangalisa.
6. Izindawo Zokuvakasha Ezinga-Isizini Emhlabeni Wonke: Andalusia Spain NgoSepthemba
Ngomkhosi nomkhosi cishe nsuku zonke, Isifunda sase-Andalusia esihle futhi esihehayo siyiphupho ngoSepthemba. Kusukela emkhosini wokuvuna iwayini kuya kwezilwandle kanye nokushuka olwandle - ngasekupheleni kukaSepthemba yisikhathi esihle sokuvakashela i-Andalusia.
Ngenkathi u-Agasti kuya ekuqaleni kuka-Septhemba kusashisa kakhulu, ngasekupheleni kukaSeptemba ungathola ithuba lemvula, noma izinsuku ezi-beach ezi-sunny, kepha hhayi ngezinga ongakwazi ukuphefumula ngalo noma ukuhambahamba uzungeze amadolobha amahle ase-Andalusia. ukubhema izinsuku ezishisayo. Ngakho-ke, I-Andalusia iyindawo efanelekile yokuvala isizini eSpain ngasekupheleni kukaSepthemba.
7. I-Algarve Portugal maphakathi no-Septhemba
I-Algarve iyamangalisa unyaka wonke, ngakho-ke asikho isikhathi esibi sokuvakasha. Ukubhukuda nokuphumula emabhishi amahle ePortugal, futhi ube nolwandle lwase-Atlantic bese uzifihlela konke, maphakathi no-Septhemba yisikhathi esihle sokuvakashela i-Algarve.
Ngenkathi ihlobo lifudumele, kubuye kugcwale kakhulu, futhi ebusika, uzohlangana nenqwaba yama-surfers azungeze enye yezindawo ezihamba phambili zama-surfers emhlabeni. Ngakho-ke, I-Algarve iyindawo ekahle yokuvala isizini maphakathi nangoSepthemba. Uzothola ithuba elingavamile lokujabulela ama-coves amahle, amawa, nemizana yokudoba ngasogwini.
8. Ukuhambela Ngaphandle Kwesizini Ukuya eVienna NgoSepthemba
Ukudla kwase-Street Viennese, iwayini, i-gin, noma iyiphi i-cocktail oyithandayo yizizathu ezimangalisayo zokuya eVienna ngoSepthemba. Ngenkathi ihlobo selicishe lahamba, futhi ngayo izixuku zabavakashi, kepha abaseViennese babuyile edolobheni kanjalo nemikhosi emikhulu.
Ngakho-ke, IVienna ingenye ephezulu 10 izindawo zokuhamba ezingekho-isizini eYurophu. Ungakhetha phakathi kokuthatha uhambo lokuhamba ezivinini ukuya ekugubheni komunye wemibukiso eminingi futhi imikhosi eVienna kuphela ngoSepthemba futhi okwabantu bendawo kuphela. Ayikho indlela engcono yokujabulela ukudla kwase-Austrian, isiko, nobuhle baseVienna kunokuxubana nabantu bendawo.
9. Ngaya Okhahlamba LwaseSwitzerland
Ngaphambi nje kokuba indawo ishintshe ibe yimibala yasekwindla futhi iziqongo zifake izembatho zazo ezimhlophe njengeqhwa, le Ngaya Okhahlamba LwaseSwitzerland is off-season yomlingo. Ngemuva nje kokuba izivakashi eziningi sezibuyele emakhaya, i-Alps yaseSwitzerland ibuyisela umlingo wabo onokuthula, kuvulelwa indawo imisebenzi yangaphandle namapikiniki.
Ngakho-ke, i-Alps yaseSwitzerland iyindawo emangalisayo yokuhamba isizini ngo-Septhemba. Isimo sezulu sifudumele, isibhakabhaka esiluhlaza okwesibhakabhaka futhi ungakujabulela ukuhamba izintaba, ngebhayisikili, ukuphumula nokuhlola ukubukwa okuhle. Ngakho, ungakwazi ngisho ukukhuphuka eyodwa izintaba ezinhle kakhulu eYurophu Jungfrau.
10. Izindawo Zokuvakasha Ezinga-Isizini Emhlabeni Wonke: EParis NgoDisemba
Ukuhamba nge-Champs-Alyeese, noma ngeTuileries Garden iye eLouvre ngaphandle kwezixuku zezivakashi kuyinto engavamile eParis. Isikhathi sokuphumula saseParis sithandana kakhulu lapho ungahambahamba edolobheni elihehe kakhulu emhlabeni, ngaphandle kwezivakashi kuwo wonke amakhona. Ngenkathi ihlobo linikeza isimo sezulu esihle kakhulu nezinsuku ezinelanga, UDisemba nakanjani ungcono kakhulu eholidini eParis.
Ukuya eParis ngaphandle kwesizini ngoDisemba kuyisithembiso semibono emangalisayo. Ngaphezu kwalokho, ungaba nokuqhuma kwabaningi Izimakethe ZikaKhisimusi.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele uhambo lwakho lwangesizini kulezi zindawo ezinamaphupho emhlabeni wonke.
Ngabe uyafuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izindawo Zokuvakasha Ezinga-Isizini Eziyi-10 Emhlabeni Wonke” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Foff-season-travel-locations%2F- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)